नोम चोम्स्की : भेन्टिलेटरको अभावमा देखियो नवउदार पुँजीवादको क्रुर अनुहार | Ratopati
चोम्स्कीः नहुनु मामाभन्दा..... मामा जाति । यो पैसाले असाध्यै अभावमा रहेको समाजका केही मानिसलाई सीमित राहत प्रदान गर्नेछ । वास्तवमै सीमान्तकृत तप्काको सहायताको लागि केही व्यवस्था गर्नेछ । तर, त्यो पैसाको लागि वषौँदेखि मुनाफा कुम्ल्याइरहेका ‘विचरा’ कम्पनीहरू दयालु सरकारको पछाडि झोली फैलाएर लाग्नेछन् । तथापि हामीले धेरै चिन्ता मान्न जरुरी छैन । ट्रम्प र उनका अर्थसचिवले त्यो पग्लिँंदै गरेको कोषको पहरेदारी गर्नेछन्, जसमा निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यदि उनीहरूले नयाँ निरीक्षक र संसदका मागलाई बेवास्ता गरे भने कसले त्यो रकमको चासो राख्ने हो र? ट्रम्प सरकारका महान्यायाधिवक्ता विलियम पेहलाम बेरको न्याय विभागले ? अथवा महाभियोगले ?
स्रोतः ट्रुथआउट्र ।एजेन्सीको सहयोगमा रातोपाटीका लागि नीरज लवजूको अनुवाद